Dhegeyso Sheekada Lama Huraan Q3
Dhegeyso Sheekada Lama Huraan Q3
Ergo 30 January, 2016 NAIROBI
Sheekadu waxay ku saabsan tahay dad ku wada nool tuulo khayaali ah oo Tub Caano lagu magacaabo oo loola jeedo tuulo barwaaqo aheyd oo dadkeedu ay wada noolaayeen iyada oon la kala xigsaneyn, qabiil iyo kooxna aan loo nisbeyneyn. Ma aheyn mid leh ciidan iyo hub oo waxay dadkeedu ku wada dhaqnaayeen xeerar ay isla oggol yihiin. Tuuladaas hadda waa laga qaxay, oo dadkeedu meelo kale ayay barakac iyo qaxooti ku tageen. Kaddib dib bay ugu soo noqonayaan tuuladoodii TUB CAANO si ay nolol cusub dib ugu billaabaan. Haddaba, halkan hoose ka dhageyso sheekada LAMA HURAAN qeybtaada 3aad oo Raadiyo Ergo ka baxda khamiis iyo sabti walba.